Maitiro Ekugadzira Yemagariro Media Kushambadzira Karenda | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 2, 2015 Mugovera, Nyamavhuvhu 1, 2015 Douglas Karr
74% yevatengesi vakaona kuwedzera kwekufamba mushure mekushandisa chete maawa matanhatu pavhiki pasocial media uye 6% yevatengi veAmerica vakataura izvo zvemagariro zvinokanganisa sarudzo yavo yekutenga. Sekureva kwaQuicksprout, kugadzira karenda yemagariro enhau kunobatsira kutarisisa zano rako rezvemagariro, kugovera zviwanikwa zvakanyanya, kukubatsira kushambadza nguva dzose, uye kuronga nzira yaunogadzira nekugadzira zvemukati.
Karenda yemagariro enhau inogona kukubatsira iwe nguva dzose kusimudzira zvemhando yepamusoro zvemukati, kudzikisa huwandu hwenguva yaunotambisa, uye kuronga nekugadzirisa zvirimo. Ona iyo Quicksprout's infographic, Nei Uchifanira Zvemagariro Media Calendar uye Maitiro Ekugadzira Imwe, kune rumwe ruzivo rwekuti nei iwe uchida social media kalendari uye nzira dzekuita imwe.
Isu tiri mafani makuru eHootsuite uye kugona kurongedza magadziriso eruzhinji kuburikidza nekukanda kwakawanda uye nekuona kushambadzira midhiya yenhau kuburikidza nemaonero avo ekarenda:
Unogona kukopa pasocial media kushambadza khalendari matemplate uye yakawanda upload template kunanga kubvaHootsuite Iyo blog. Isu tinokurudzira yega yega vezvenhau kushambadzira kugadzirisa inosanganisira zvinotevera:
ani - Ndeipi account kana ndeapi maakaundi ane chekuita nekudhindisa pasocial update uye ndiani achave nebasa kupindura chero zvikumbiro?
chii - Chii chauri kunyora kana kugovana? Rangarira kuti mifananidzo nevhidhiyo zvichawedzera kune kubatanidzwa uye kugovana. Wakambotsvaga ma hashtag kuti ubatanidze kuve nechokwadi chekuti unosvika kune yakafara, vateereri vanowirirana?
apo - Urikupi kugovana zvirinani uye uchaita sei kuti uvandudze iyo chiteshi iwe yauri kutsikisa pairi?
apo - Uchagadzirisa riinhi? Nezve zviitiko zvinotungamirwa nezvinoitika, uri kuverenga pasi nekufamba kwenguva kuchiitiko here? Zvekuvandudza kiyi, urikudzokorora izvo zvadzokororo kuitira kuti vateereri vako vazvione kana vakashaiwa zvekutanga zvekuvandudzwa? Iwe une zviitiko zvekutenderera senge mazororo kana misangano kwaunoda kushambadza pamberi, panguva uye shure?
Sei - inowanzo shayikwa, sei uri kutumira ino yekudyidzana? Kuve nechokwadi chekufunga nezvekuti nei zvichizokubatsira kuyeuka kudaidzwa-kuita-chiito chaunoshuvira kuti fan kana muteveri atore pamwe nekuti unozoyera sei kubudirira kwekushambadzira kwevanhu.
sei - imwe nzira yakakosha yarasikirwa… uchaita sei kuti ukwidziridze? Iwe une chirongwa chekumiririra chevashandi kana vatengi chekugovana? Iwe une bhajeti rekushambadzira iyo positi pane yemagariro chiteshi uko magariro magadzirirwo anowanzo svinwa (senge Facebook)?
Tags: karendakalori wezvinyorwakarenda yemagarirosocial media kalendaripasocial media kushambadzira karenda
Aug 5, 2015 pa 8: 43 AM
Great post! Ini ndangobva kutanga kushandisa Twitter, saka ndichafanirwa kufunga nezve mamwe emazano ekubatsira kusimudzira blog rangu! Ndatenda.